Yakaonekwa yekuchengetedzwa kukanganisa muKernel yegore 2015 | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe zvikanganiso zvekuchengetedza zvinowanzoonekwa munguva pfupi, pane dzimwe nguva apo zvikanganiso izvi zvinogona kucherechedzwa zvakanonokakunyange makore akazotevera. Mune ino kesi, kukanganisa kwekuchengeteka kwaonekwa muLinux kernels yeshanduro 3.X, ndiko kuti, egore ra2015.
Kukundikana uku ndiko nekuda kwekukanganisa mukutungamira kwendangariro, mushandisi aigona kushandisa Elf mafaera kukwidziridza mvumo uye nekudaro kuwana rombo rakanaka pakombuta kwavasingafanirwe kuve nazvo, zvichitungamira kukuwandisa kwemakomputa.
Chaizvoizvo, kutadza yakanga yatowanikwa mumazuva ayo, asi zvaifungidzirwa kuti kwaive nyore kurangarira kutadza kwaisazove nebasa. Nekudaro, ikozvino mushure mekuongororwa neQualys, ivo vaona kuti kukanganisa uku kunogona kuve kwakanyanya kukosha kupfuura zvayaitaridzika pakutanga.
Uye mushandisi anozoshamisika kuti zvingakanganisa sei chengetedzo yavo izvo tsanga yechinyakare izvo zvisingachashandiswi mukugovera kwanhasi kune chitsva chitsva. Mhinduro yacho iri mumaseva anoshanda masystem, kunyanya Red Hat kana Cent OS, uye mumasisitimu anoshanda aine rutsigiro rurefu, saDebian.
Zvikwata izvi vane maLTS vhezheni ane akareba hupenyu mabhureki, iyo ichiri kushandisa vhezheni yekare yeiyi kernel. Kunyange shanduro dzakabuda gore rino dzakakanganiswa, idzo dzakaramba dzichisarudza kernel kubva kubazi re3.x pachinzvimbo chekuda bazi re4. Nechikonzero ichi, ivo vakave nekukanganiswa neiyi njodzi, chimwe chinhu chinotidzidzisa kuti hazvina kunonoka kuti tiwane chakakomba chengetedzo.
Zvisinei, zvinyorwa zvinoenderana nekuchengeteka zvakatoburitswa kare neakakanganiswa masisitimu anoshanda, ayo anogadzirisa kukanganisa uku uye anotendera vashandisi kuti varambe vachishanda zvakajairika
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Yakaonekwa yekuchengetedzwa kukanganisa muKernel yegore 2015
Linux LTS kernel rutsigiro ichave makore matanhatu